Shamarree of wallaaltee hospitaala galtee mucaa intalaa waliin of barte - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, SWNS
Ebony Stevenson mucaashee dinqiisiiftu Elodie waliin
Shamarreen dhukkuba mataa cimaa ishee mudateen walqabatee dhukkubsaa turte dhukkubni itti cimuu isaatiin ofillee wallaalteee wallansaaf hospitaala galtee guyyoota afuriin booda yeroo dammaqxu mucaa intalaa tokko waliin of argite.
Ebooniin shamarree umuriin ishee waggaa 18 taatedha. Magaalaa Oldham jiraatti. Dhukkubsataa turtee hanga of wallaaltee hospitaala seentuutti akka ulfa taate hin beektu ture.
Of wallaalte wallaansaaf gara hospitaalaatti erga geeffamtee booda, doktoroonni akka isheen baayyee dahumsatti dhiyaatte hubatanii ciibsanii ture.
Daa'immni ishees gadameessa 'didelphys' jedhamu keessatti dhookatte turte. Haalli akksii kunis waan namoota muraasa mudatudha.
Gadameessi ishee kunis waan karaa dugda isheetti naanaweef ulfa ta'unshee hinhubatamu ture.
Laguun ji'aa ishee itti dhufaa kan ture yommuu ta'u gadmeessi biroon ammoo guddina daa'ima isheef kan oolu ture.
Barattuun Ispoortii tunis gaafa Mudde 6 hirribaa yeroo kaatu daa'ima ulfaatiina 7lbs 10oz qabdu dahuushee hubatte.
Isheenis yeroo ulfa turtetti miira sochii mucaa garaa keessatti, ol deebisiisuufi laguun hafuu hin argine turte.
Waa'ee 'Raajii' kana
Haati yeroo jalqaabaa mucaa ishee 'Elodie' jechuun moggafte tunis, taateen kunis 'injifannoodha jechuun ni salphata. "Daa'imakoo arguun waan hin amanamnedha. Abjuu natti fakkaata. Waan qaamakoon alaatti rawwatame natti fakkaata," jette.
"Mucaakoo waliin walitti hidhannaa qabaachu nan yaadda'a. Sabaabni isaas dhufaatii isheetii takkumaa itti yaadee hinbeeku. Garuu isheenis baayyee nama dinqisiifti."
"Kun raajiidha. Elodie'n eenyuttiyyu hin jijjiirru.''
Akka doktoroonni jedhanitti, gaggabdoo sabaaba dhukkuba 'pre-eclampsia' jedhamu ishee mudatee tureen, ergasii booda harmee isheetti akka ulfa tate himuun akka da'uu qabdu itti beeksifne. Ol
Turtii gaggabdoo sa'aatii sadii booda kutaa dahumsaa baqaqsanii hodhuu yeroo ariifataan Elodie gara addunyaa kanaatti akka dhuftu taasifameera.
Haati, shamarree kanaa Aadee sheree dubartii umuriin waggaa 39 yoo taatu, erga intaalli ishee mana qaama itti dhiqattu keessatti of wallaaluun dhukkubsachuu eegalteen toora 999 irratti bilbiltee waamte.
'Akkuma tasaa waan hin eegamne mul'aate'
Haati ishee" isheen ulfa ta'uu ishee mormitus doktoroonni garuu beeku ture. Waan baayyee nama naasisuudha."
"Doktorroonni gaggabdootu akka ulfichi gara duugda isheetti naannawee ture sun akka tasaatti mul'atu godhe" jedhanii amanu.
Deessuun kun akka jeettuti, "yeroon damaquu Elodie lapheekoo irra kaa'amtee turte."
Namatti hin tolu waan tureef akka narraa fudhaan hakiimoota gaafadheen ture, waan naaf hingalleefuu.
Haatikoos waan hunda osoo narsoonni achi jiranuu natti himte. Achii boodas intala bareedduu tiyya akkan sirriin hammadhuuf deebisanii natti kennan.
"Baayyee kan nama sodaachisuufi yaachisu ta'ullee, mucattiin miidhagduudha".
Amma deessuun kun ji'aa Guraandhalaa keessa gara barnoota ishee Kooleejjii Middleton itti deebiti.